ချန်ပီယံလိဂ်မဲခွဲမှု အမှား‌အပေါ်ကို ပိုစ့်တင်ပြီး ဟာသလုပ်ခဲ့တဲ့ ယူနိုက်တက်စစ်သူကြီး ဖာနန်ဒက်ဇ် - Myanmar Globe
ယူနိုက်တက်စစ်သူကြီး ဘရူနိုဖာနန်ဒက်စ်ကတော့ ချန်ပီယံလိဂ်၁၆သင်းအဆင့် မဲခွဲမှုမှာ အလွဲအချော်တွေဖြစ်ခဲ့တဲ့အပေါ် ပိုစ့်တင်ပြီး ဟာသလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ပထမအကြိမ် မဲခွဲမှုအပြီးမှာ ယူနိုက်တက်နဲ့ ဟာ ပြင်သစ်ကလပ် ပီအက်စ်ဂျီနဲ့ကျနေခဲ့လို့ အားလုံးက ‌ရော်နယ်လ်ဒို vs မက်ဆီ rematch ပွဲကို ကြည့်ရပြီဆိုပြီး အားခဲနေချိန်မှာပဲ အငြင်းပွားဖွယ်ရာတွေ ရှိခဲ့လို့ မဲပြန်ခွဲခဲ့ရတာပါ။ ဒုတိယအကြိမ်မဲခွဲအပြီးမှာတော့ ယူနိုက်တက်ဟာ လာလီဂါချန်ပီယံ အက်သလက်တီကိုနဲ့ ဆုံတွေ့ခဲ့ပါတယ်။
ဆွဇ်ဇာလန်နိုင်ငံ နီယွန်မြို့မှာ ပြုလုပ်ခဲတဲ့ မဲခွဲပွဲမှာ‌တော့ UEFA အနေနဲ့ အလွဲလွဲအချော်ချော်တွေ ပြုလုပ်ခဲ့လို့ အက်သလက်တီကို အသင်းက ကန့်ကွက်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါကြောင့် UEFA အနေနဲ့ အရှက်ရစရာဖြစ်ခဲ့ရပြီး ဒုတိယအကြိမ်မဲခွဲမှုကို နာရီပိုင်းအတွင်း ပြန်လည်ပြုလုပ်ခဲ့ရတာပါ။ ပထမအကြိမ် မဲခွဲမှုအပြီးမှာ ဘိုင်ယန်မြူနစ်နဲ့ တွေ့ဆုံခဲ့တဲ့ အက်သလက်တီကို အသင်းဟာ ဒုတိယအကြိမ်မဲခွဲအပြီးမှာတော့ အိပ်မက်ဆိုးတွေပေးနေကျ ကစားသမားဖြစ်တဲ့ ‌‌ရော်နယ်လ်ဒိုဦးဆောာင်တဲ့ ယူနိုက်တက်နဲ့ တွေ့ဆုံခဲ့တာပါ။
UEFAလို အဖွဲ့အစည်းကြီးရဲ့ ဒီလိုပွဲမျိုးမှာ အလွဲလွဲ အချော်ချော်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ ဖြစ်ရပ်အပေါ် ကလပ်အသင်းတွေ၊ အားကစားသမားတွေ၊ ဂျာနယ်လစ်တွေ၊ အသင်းပရိတ်သတ်တွေက ဆိုရှယ်မီဒီယာအပေါ်မှာ ဝေဖန်ခဲ့ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ အဒီအထဲမှာ ယူနိုက်တက်ရဲ့ စစ်သူကြီး ဖာနန်ဒက်ဇ်လည်းပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။
ဖာနန်ဒက်ဇ်က သူ့ရဲ့ Follower 2.4 သန်းရှိတဲ့ တွစ်တာအ‌ကောင့်မှာ “တတိယအကြိမ် မဲခွဲပွဲက ဘယ်အချိန်လဲ…?” ဆိုပြီး အီမိုဂျီတွေနဲ့ ဟာသလုပ်ခဲ့တာပါ။
ယူနိုက်တက်ဟာ ဒီယေဂိုး ဆီမြွန်နီရဲ့ အသင်းနဲ့ ရှုံးထွက်အဆင့်မှာ ဖေဖော်ဝါရီလနဲ့ မတ်လမှာ နှစ်ကျော့ ယှဉ်ပြိုင်ကစားရတော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီတစ်ခါမှာလည်း သရဲနီဘုရင်ကြီး ရော်နယ်လ်ဒိုက အက်သလက်တီကို အသင်းကို အိပ်မက်ဆိုးတွေမက်စေအုံးမလားဆိုတာ စောင့်ကြည့်ရအုံးမှာပါ…
ခနျြပီယံလိဂျမဲခှဲမှု အမှား‌အပျေါကို ပိုဈ့တငျပွီး ဟာသလုပျခဲ့တဲ့ ယူနိုကျတကျစဈသူကွီး ဖာနနျဒကျဇျ
ယူနိုကျတကျစဈသူကွီး ဘရူနိုဖာနနျဒကျဈကတော့ ခနျြပီယံလိဂျ၁၆သငျးအဆငျ့ မဲခှဲမှုမှာ အလှဲအခြျောတှဖွေဈခဲ့တဲ့အပျေါ ပိုဈ့တငျပွီး ဟာသလုပျခဲ့ပါတယျ။ ပထမအကွိမျ မဲခှဲမှုအပွီးမှာ ယူနိုကျတကျနဲ့ ဟာ ပွငျသဈကလပျ ပီအကျဈဂြီနဲ့ကနြခေဲ့လို့ အားလုံးက ‌ရျောနယျလျဒို vs မကျဆီ rematch ပှဲကို ကွညျ့ရပွီဆိုပွီး အားခဲနခြေိနျမှာပဲ အငွငျးပှားဖှယျရာတှေ ရှိခဲ့လို့ မဲပွနျခှဲခဲ့ရတာပါ။ ဒုတိယအကွိမျမဲခှဲအပွီးမှာတော့ ယူနိုကျတကျဟာ လာလီဂါခနျြပီယံ အကျသလကျတီကိုနဲ့ ဆုံတှခေဲ့ပါတယျ။
ဆှဇျဇာလနျနိုငျငံ နီယှနျမွို့မှာ ပွုလုပျခဲတဲ့ မဲခှဲပှဲမှာ‌တော့ UEFA အနနေဲ့ အလှဲလှဲအခြျောခြျောတှေ ပွုလုပျခဲ့လို့ အကျသလကျတီကို အသငျးက ကနျ့ကှကျခဲ့ပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ UEFA အနနေဲ့ အရှကျရစရာဖွဈခဲ့ရပွီး ဒုတိယအကွိမျမဲခှဲမှုကို နာရီပိုငျးအတှငျး ပွနျလညျပွုလုပျခဲ့ရတာပါ။ ပထမအကွိမျ မဲခှဲမှုအပွီးမှာ ဘိုငျယနျမွူနဈနဲ့ တှဆေုံ့ခဲ့တဲ့ အကျသလကျတီကို အသငျးဟာ ဒုတိယအကွိမျမဲခှဲအပွီးမှာတော့ အိပျမကျဆိုးတှပေေးနကြေ ကစားသမားဖွဈတဲ့ ‌‌ရျောနယျလျဒိုဦးဆောာငျတဲ့ ယူနိုကျတကျနဲ့ တှဆေုံ့ခဲ့တာပါ။
UEFAလို အဖှဲ့အစညျးကွီးရဲ့ ဒီလိုပှဲမြိုးမှာ အလှဲလှဲ အခြျောခြျောဖွဈခဲ့တဲ့ ဖွဈရပျအပျေါ ကလပျအသငျးတှေ၊ အားကစားသမားတှေ၊ ဂြာနယျလဈတှေ၊ အသငျးပရိတျသတျတှကေ ဆိုရှယျမီဒီယာအပျေါမှာ ဝဖေနျခဲ့ကွတာလညျးဖွဈပါတယျ။ အဒီအထဲမှာ ယူနိုကျတကျရဲ့ စဈသူကွီး ဖာနနျဒကျဇျလညျးပါဝငျခဲ့ပါတယျ။
ဖာနနျဒကျဇျက သူ့ရဲ့ Follower 2.4 သနျးရှိတဲ့ တှဈတာအ‌ကောငျ့မှာ “တတိယအကွိမျ မဲခှဲပှဲက ဘယျအခြိနျလဲ…?” ဆိုပွီး အီမိုဂြီတှနေဲ့ ဟာသလုပျခဲ့တာပါ။
ယူနိုကျတကျဟာ ဒီယဂေိုး ဆီမွှနျနီရဲ့ အသငျးနဲ့ ရှုံးထှကျအဆငျ့မှာ ဖဖေျောဝါရီလနဲ့ မတျလမှာ နှဈကြော့ ယှဉျပွိုငျကစားရတော့မှာ ဖွဈပါတယျ။ ဒီတဈခါမှာလညျး သရဲနီဘုရငျကွီး ရျောနယျလျဒိုက အကျသလကျတီကို အသငျးကို အိပျမကျဆိုးတှမေကျစအေုံးမလားဆိုတာ စောငျ့ကွညျ့ရအုံးမှာပါ…
ယခုလိုခေတ်ကာလမှာ ဗိုက်နာတယ်ပြောပြော ဈေးဘယ်လောက် ပေါပေါ ကားတွေ အိမ်ခြံမြေတွေ လုံးဝ မဝယ်သင့်တဲ့ အကြောင်းအရင်း…
ယခုလိုခေတ်ကာလမှာ ဗိုက်နာတယ်ပြောပြော ဈေးဘယ်လောက် ပေါပေါ ကားတွေ အိမ်ခြံမြေတွေ လုံးဝ မဝယ်သင့်တဲ့ အကြောင်းအရင်း… ချစ်လို့ပြောတယ်မှတ်ပါ။ ဒီအချိန် ဈေးဘယ်လောက်ပေါပေါ ကားမဝယ်နဲ့။ အိမ်ခြံမြေ မဝယ်နဲ့။ အဝတ်အစား မဝယ်နဲ့။ ဖုန်း laptop စတာတွေ မလိုပဲ မဝယ်နဲ့။ အိမ်သုံး ပစ္စည်းတွေ မလိုပဲ မဝယ်နဲ့။ မုန့်တွေ တစ်ရက်တစ်ရက် သောင်းဂဏန်း လျှောက်ဝယ်မစားနဲ့။ ဘယ်သူ့ကိုမှ ငွေမချေးနဲ့။ အပေါင်မခံနဲ့။ အကောင်းဆုံးက ထမင်းနဲ့ဟင်းချက်စရာက လွဲရင် ကျန်တာ ဘာမှ မဝယ်နဲ့။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ အခုဆို stay home ကာလထပ်တိုးလိုက်တဲ့အတွက် ကျတော်တို့မှာ ဝင်ငွေမရှိဘူး။ အဲ့အတွက် ထွက်ငွေကို တတ်နိုင်သမျှ နဲအောင်ကြိုးစားရမယ်။ လုပ်ငန်းတွေ ပြန်စရမယ့်အချိန် လက်ထဲမှာ ပိုက်ဆံရှိနေမှရမယ်။ ကိုယ်ပိုင်ငွေ […]
တွန်ဂါ ရေအောက် မီးတောင်ပေါက်ကွဲ မှု ကမ္ဘာတစ်ဝန်း ရိုက်ခတ် ပြီး ဆူနာမီ သတိပေးချက် တွေ ထုတ်ပြန်ခဲ့….. တောင်ပစိဖိတ် ကျွန်းနိုင်ငံ တွန်ဂါ မှာ စနေ နေ့ က ရေအောက် မီးတောင်ပေါက်ကွဲမှုကြောင့် ဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့ ဆူနာ မီ လှိုင်းလုံးတွေကြောင့် ထိခိုက် ဒဏ်ရာရသူအရေအတွက်ကိုမသိရသေးပေမယ့် ဒီမီးတောင်ပေါက်ကွဲမှု အရှိန် အဟုန် ကို ကမ္ဘာတစ်ဝန်း ကသိရှိခံစားခဲ့ရပါတယ်။ ဆက်သွယ်ရေး လိုင်းတွေ အနှောင့်အယှက်ဖြစ်ပြီး သတင်းအချက်အလက် နှောင့်နှေးနေတာကြောင့် ထိခိုက်သူစာရင်းကို မသိရသေးပေမယ့် ရေအောက်မီးတောင်ပေါက်ကွဲမှုကြောင့် လေးပေလောက်မြင့်တဲ့ ပင်လယ်လှိုင်း တွေ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်။ ဟန်ဂါ တွန်ဂါ ဟန်ဂါ ဟာအာပိုင် မီးတောင်ဟာ ဒေသစံတော်ချိန် ညနေ ၅နာရီ ၁၀ မိနစ်မှာ ပေါက်ကွဲခဲ့ပြီး […]
မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဆိုလာ လျှပ်စစ်မီး တပ်ဆင် အသုံးပြုတော့မယ်ဆိုရင် ဂျင်းမမိစေဖို့ သိထားသင့်တဲ့ အရာများ
မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဆိုလာ လျှပ်စစ်မီး တပ်ဆင် အသုံးပြုတော့မယ်ဆိုရင် ဂျင်းမမိစေဖို့ သိထားသင့်တဲ့ အရာများ Solar system တစ်ခုဟာ watt ချင်းတူရင် မီးစက်တစ်လုံးဝယ်သုံးတာထက် ပိုပြီး ကုန်ကျစရိတ်များပါတယ်.. ဒါပေမယ့် ရေရှည်တွက်မယ်ဆိုရင် ဆိုလာက အများကြီး တွက်ခြေကိုက်တယ်.. Solar system မှာ ဘာတွေသိသင့်လဲဆိုတော့ ပထမဆုံး solar panel ပါ.. လက်ရှိ solar panel မှာ Poly, Mono, Thin film solar ရယ်ဆိုပြီး သုံးမျိုးရှိပါတယ်.. Thin film solar ကအကောင်းဆုံးဆိုပေမယ့်ဈေးများတယ် အသုံးနည်းတယ်.. Satellites တွေမှာလောက်ပဲ သုံးတယ်လို့သိပါတယ်.. Poly နဲ့ Mono က အသုံးအများဆုံးပါ.. Poly က […]
ဒုတိယအကြိမ် မဲပြန်ခွဲခါမှ အကြောက်ဆုံး အဆိုးရွားဆုံး သရဲနီကြီးရော်နယ်လ်ဒို အိပ်မက်ဆိုးတွေမက်ရတော့မယ့် အက်သလက်တီကို